Law Eh Soe – အကြွေးပိုင်ရှင် ဒေါက်တာစောဝါးထူး | MoeMaKa Burmese News & Media
(photo taken by Law Eh Soe)
ဇန်န၀ါရီင်္လ ၂၃၊ ၂၀၁၂
(Photo Credit – http://pbbc09.blogspot.com/2010/08/dr-saw-wah-htoo-led-service-at-pbbc.html )
7 Responses to Law Eh Soe – အကြွေးပိုင်ရှင် ဒေါက်တာစောဝါးထူး
Sayar on March 12, 2012 at 11:02 am
စောဝါးထူးအဖြစ်မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်အစဉ်အမြဲပြုံးနေတတ်သောသူ့ အားကျွန်ုပ်တို့ ကချစ်စနိုး”နော်ဝါးထူး”ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်ကိုမှတ်မိနေသည်။၁၉၆၇ခုနှစ်တရုတ်အရေးအခင်းတွင်ပါဝင်မှု
ကါမော်လမြိုင်အနာကြီးဆေးရုံသို့ အပို့ ခံခဲ့ရသည်။ကြားသိရသည်မှာ၎င်းအားအပြစ်ပေးခြင်းဟုဖြစ်သည်။
“နော်ဝါးထူး” တယောက်ကောင်းစွာအနားယူနိုင်ပါစေ – အာမင်။
Mohmoh on March 13, 2012 at 2:40 am
ကါမော်လမြိုင်အနာကြီးဆေးရုံသို့ အပို့ ခံခဲ့ရသည်။ကြားသိရသည်မှာ၎င်းအားအပြစ်ပေးခြင်းဟုဖြစ်သည်”
Saya Saw Wah Htoo chose to serve the Lord as he acceptedaposition at Moulmein Christian Leprosy and Skin Diseases Hospital after Dr Edward retired. As far as I know, the hospital is the one and only Christian hospital left after nationalization in ’60s. It’s not ran by government. It’s nothing to do with punishment for his political involvement though he might not be able to join the government service.
Set Htun on March 12, 2012 at 11:04 am
A remarkable man who dignify the human’s dignity !
saw alexander on March 12, 2012 at 8:13 pm
ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝါးထူး ကောင်းကင်ဘုံအရှင် အဖ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါး သို့ ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရသော်လည်း လူ့သားတစ်ယောက်အမြင်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အတိုင်းအဆ မရှိဝမ်းနည်းမိပါသည်။
Hong Kong မှ Seaman များ
ကျော်စွာ on March 12, 2012 at 6:24 pm
လေးစားဂုဏ်ယူအပ်ပါသည် ဒေါက်တာ စောဝါးထူး ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းပါစေသောဝ်
gunner on March 12, 2012 at 7:39 pm
The last time I saw him was at KLBC in KL. Rest in peace, Dr. Saw Htoo Wah.
nawthalayphaw on March 15, 2012 at 3:56 pm
လူမမြင်ဖူးပေမဲ့ ဆရာဒေါက်တာစောဝါးထူးရဲ. အနစ်နာခံစွန်.လွှတ်ပေးဆပ်မှုကိုကြားရပါတယ်
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ ထမင်းငတ်တော့မယ် ဆရာတို့ရယ် … https://t.co/99ibzNA03D https://t.co/ZAATA5EsyA about6hours ago ReplyRetweetFavorite
ဆောင်းယွန်းလ ● ရေလောင်းမိခဲ့တဲ့ အဆိပ်ပင်တွေအကြောင်း https://t.co/2m2fCVcCGq https://t.co/UCA14F3P5a about6hours ago ReplyRetweetFavorite
စိုးခိုင်ညိန်း ● မြို့ပြရန်ကုန် https://t.co/J2mwTk28US https://t.co/wY4lppLMAW about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ https://t.co/KmQHjtnMgA https://t.co/63RzNlYDOL about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● မြန်မာလျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန စံနမူနာယူရမဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ https://t.co/qFXVYoxLc3 https://t.co/frceyETqi0 about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite